NLD | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
မဲဘယ်လိုခိုး၊ ဘယ်လိုလိမ်ကြသလဲ (၁) – How Military+USDP Government Make Fake Vote for 2012 By-Election March 19, 2012
Filed under: Election,MY NEWS,NLD,PHOTOS,USDP — Nyo Gyi @ 1:00 am
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မန္တလေးခရီးစဉ် ဓာတ်ပုံများ – Mother Suu’s Mandalay Trip (Photos) March 3, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 2:44 pm
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံသည့် မန္တလေးသားများကို မှတ်တမ်းတင်ထားရန် အာဏာပိုင်များအဆင့်ဆင့် ညွှန်ကြား March 2, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD — Nyo Gyi @ 5:19 am
မန္တလေးမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက စည်ပင်လုပ်သားများအား အသုံးချ၍ ၄င်းတို့ပါတီအတွက် မဲဆွယ်ခိုင်း – Dirty Methods of USDP February 26, 2012
Filed under: MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 10:12 pm
အမေစုကို မန်းကျုံးဘေးမှာ မဏ္ဍပ်ထိုးပြီး ကြိုရအောင် – A Plan from Mandalay to Welcome Mother Suu February 18, 2012
Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 11:17 pm
နန်းတော်ကျုံးဘေးပတ်လည်မှာ မဏ္ဍပ်တွေထိုးပြီး ကြိုဆိုကြရအောင် !
မန်းသင်္ကြန်လို ကျုံးဘေး ပတ်ပတ်လည်မှာ မဏ္ဍပ်တွေဆောက်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျုံးဘေးတစ်နေရာမှာ အကြီးမား၊ အခမ်းနားဆုံး ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မဏ္ဍပ်ကြီး တစ်ခုပေါ်ကနေ မိန့်ခွန်းပြော။
ကျန်တဲ့ မဏ္ဍပ်တွေပေါ်မှာ Led TV ကြီးတွေ (ဒါမှမဟုတ်) Projector နဲ့ ပိတ်ကားစကြီးတွေထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မိန့်ခွန်းပြောတာကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသ။
ကဲ…! တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် ဘယ်လောက်များ ကျေနပ်အားရစရာ ကောင်းလိုက်မတုန်း။